I-Bitumen Tank, iBitumen Emulsion Plant, I-Diathermic Amafutha Ombumbulu - iJianeng
Imodi yokufudumeza yamathangi asphalt ovundlile akhiqizwa yinkampani yethu ingahlukaniswa: ukushisa kawoyela oshisayo, ukufudumeza kukagesi nokushisa ngokuqondile ngomshini wokushisa. Ivolumu lingahunyushwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zekhasimende, futhi lingangena ezokuhambisa ezitsheni. Izinhlobo ezahlukahlukene zensimbi yokufudumeza neyokuxuba ingakhelwe ithangi le-bitumen ngezinhloso ezihlukile, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zezimo zangempela zokusebenza. Lapho kusetshenziswa amathangi amaningi e-bitumen ngasikhathi sinye, kungafakwa ipayipi elingaphambi kwetangi ukwenza lula ukufakwa kwesiza somsebenzi. Futhi wonke amapayipi afakiwe ngaphambili efektri. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, akukho shintsho oludingekayo emsebenzini, ukuze sikwazi ukuthola indawo ukuvikela ukuthembeka kwamapayipi. Uma ithangi le-bitumen lidinga ukunikezelwa kwegesi ye-flue, lingahunyushwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zekhasimende.
Funda kabanzi Xhumana nathi
Imodi yokushisa yethangi le-asphalt mpo elikhiqizwe yinkampani yethu lingahlukaniswa: ukushisa kokwenza uwoyela nokushisa ngogesi. Inani lingafakwa ngokwezifiso ukusuka ku-20 m³ kuye ku-2000 m3 ngokuya ngezidingo zekhasimende. Izinhlobo ezahlukahlukene zamakhoyili wokushisa namadivaysi okuxuba angenzelwa amathangi e-bitumen ngezinhloso ezahlukahlukene zokuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa kwezimo zangempela zokusebenza. Ithangi le-asphalt elingama mpo lingafakwa ngesibonisi se-elekthronikhi se-elekthronikhi ngokuya ngezidingo zekhasimende ukuqaphela ukulawulwa okuzenzakalelayo kweleveli ephakeme naphansi. Uma ithangi le-bitumen lidinga ukunikezelwa kwegesi ye-flue, lingahunyushwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zekhasimende.
Ithangi lohlobo lwebhitume lokukhiqizwa yinkampani yethu lilungele ukugcinwa kwethabhamu nokuhamba. Ingathuthwa ngqo olwandle ngokuya ngemodi yokuhamba ngesiqukathi, ngevolumu enkulu yamamitha ayi-55 cubic, futhi ingakhiwa futhi ifakwe nama-agitators. Ithangi le-bitumen tank lisebenziseka kalula ukuhambisa nokuhambisa i-asphalt. Ithangi lohlobo lwebhitume lingenziwa ukushisa okushisa i-oyela, ukufudumeza kukagesi noma ukufudumeza okuqondile ngabashisi. Lapho kusetshenziswa amathangi amaningi ngasikhathi sinye, ipayipi elingaphambi kwetangi lingakhiwa futhi lifakwe ukwenza lonke ithangi liphelele kakhulu lapho lihlangana esizeni.
I-bitum decanter ekhiqizwa yinkampani yethu kulula ukuyisebenzisa nokuyifaka. Ithangi ihlukaniswe ngamakamelo amabili, ingxenye engenhla ifakelwe i-coil Heating, uhlelo lwe-hydraulic lucindezela ibhakede le-bitumen lilinye, bese kuthi ibhitimu incibilike ngokushisa. Uwoyela ophansi ongashisayo uyavutha ukuze aqhubeke ancibilike i-bitumen, bese uyathululwa ukuze uyisebenzise. I-bitum decanter ingafakwa esitsheni sokuhamba. Inkampani yethu futhi ikhiqiza i-block (isikhwama) sokuncibilika kwe-cantilever crane hoisting, ukusebenza okulula, ukusebenza kahle okuphezulu.
Isilondolozi esishisayo esakhiwa yinkampani yethu ihlukaniswe ngohlobo lokuvikela imvelo nohlobo oluvamile. Ingafaniswa nezitshalo zokuxuba asphalt ezingama-80t / h-480t / h, futhi ivolumu nayo ingafakwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zekhasimende. Umthamo wamathani ayi-160 nangaphansi ungangena ezokuhambisa ezitsheni. Inkampani yethu ithuthukise ngokuqhubekayo inqubo yokukhiqiza yesilondolozi esishisayo seminyaka eminingi, ngokusebenza okuthembekile. Indawo yokugcina indawo eshisayo enobungane ihlangabezana kahle nezidingo zokuvikelwa kwemvelo.
Isitshalo se-Bitumen Emulsion
Isitshalo se-emulsion se-bitumen esikhiqizwe yinkampani yethu sinohlaka olulodwa lwamafutha, ithangi elilodwa lamanzi ashisayo, amathangi amabili okuxubha uketshezi, ithangi elilodwa lethamu, ithamu elilodwa le-bitumen yethamu (yokusebenzisa okwesikhashana), iphampu eyodwa yejubane elishintshayo, iphampu eyodwa ye-emulsion yejubane , isigayo esisodwa, iphampu eyodwa yokulethwa kwe-bitumen kanye negumbi elilodwa lokulawula ugesi. Kanye nepayipi lokushisa lamafutha afudumele elihlobene, ipayipi lokuhambisa ibhitume, ipayipi lokuhambisa i-emulsion. Isitshalo se-emulsion se-Bitumen sehlukaniswe izinhlobo ezimbili:--automatic egcwele kanye ne-automatic. Okwazenzakalelayo ngokugcwele kwangaphambilini kuhlanjululwe i-emulsifier, nange-mettractive metering indlela, okulinganisa ngokuzenzakalelayo i-emulsion nebitume emgodini. Le nqubo ilula, kulula ukuyisebenzisa, kulula ukuyifunda nokuyiqonda.
I-SBS Polymer modified bitumen pant ekhiqizwe yinkampani yethu isebenzisa i-skid mounted design mobile, elula kakhulu ukufakwa kanye nama-disasindows. Ithangi lokuxuba lifakwe i-agitator eshesha kakhulu ukuze igweme ukungalingani okwanele kwama-sbs nebitume. Ngaphandle kokuvuvukala kwangaphambili, kungakhiqizwa ngokugaya ngenkathi usondla. I-SBS Polymer modified bitumen pant ihlukaniswe izinhlobo ezimbili: i-automatic egcwele kanye ne-automatic. Isitshalo se-PMB esizenzakalelayo sisindwa imojuli enesisindo futhi ifaniswe kahle nama-sbs nebitume. Uhlelo lokulawula ikhompyutha lungabheka isimo sokukhiqiza ngesikhathi sangempela.
Isithando sokuthambisa i-organic carpentering conduction oyilenjini yethu ehlukaniswe yinkampani yethu ihlukaniswe uhlobo olujwayelekile kanye nohlobo lomoya oshisayo. Isishisi kungaba ngamafutha akhanyayo, igesi yemvelo noma igesi kawoyela. I-boiler yohlobo lomoya oshisayo isebenzisa ukushisa okusele kwegesi ye-flue ukushisa umoya ukuze kuhlanganiswe umlilo, okunganciphisa izinga lokushisa komoya wegesi, ngakho-ke ukulahleka kokushisa kwegesi yokuphelelwa umoya kungasetshenziswa cishe ama-7%, ngakho-ke ukusebenza kwe-boiler cishe kungama-90 %.
I-Wuxi Jianeng yasungulwa ngonyaka we-1999. Inamamitha skwele angama-24,000 wezitshalo, ama-yuan angama-38.28 ezigidi zezimali ezibhalisiwe, ochwepheshe abangaphezu kuka-20 nabasebenzi abayi-100.
I-Wuxi Jianeng ibaluleke kakhulu ekukhiqizweni kwemishini yokusekela yesitshalo sokuxuba i-asphalt. Ikhasimende elibambisene isikhathi eside lifaka i-LINTEC, AMMANN, NFLG, XCMG, MARINI, D&G, NIKKO noTanaka.
UWuxi Jianeng ubesenza umsebenzi wobunjiniyela bemishini yobunjiniyela nokukhiqiza iminyaka engaphezu kwamashumi amabili. Ngokufuna ukusebenza komkhiqizo, ithole inqwaba yamalungelo obunikazi obuqambi namalungelo obunikazi wemodeli, abathole indumalo engavunyelwe embonini.
Ithangi le-bitumen mpo ye-XCMG
Ithangi le-bitumen elingaphezulu le-NFLG
Isilo sokushisa esishisayo se-AMMANN
Ithangi le-bitumen mpo ye-AMMANN
Isilondolozi esishisayo seLintec
Ithangi le-bitumen elingaphezulu le-AMMANN
Ithangi le-bitumen mpo ye-D&G 2
Ngegolide , i- Asphalt Batching Station Lby1000 (80t / H) , i- Asphalt Melting Equipment , i- Drumn Melting Unit", i- Amabhola Okulondolozwa Kwe-Bolt, i- Bitumen Melting Equipment , i- Yonke Imikhiqizo